Tag: ShanduraKit | Martech Zone
Pulse: Wedzera Kutendeuka 10% neHupupuriro hwevanhu
Muvhuro, July 13, 2020 China, Kurume 4, 2021 Douglas Karr
Mawebhusaiti ayo anowedzera mhenyu humbowo hwemagariro mabhenji anosimudzira iwo maitiro ekushandurwa uye kuvimbika kwavo. Pulse inoita kuti mabhizinesi aratidze zviziviso zvevanhu chaivo vari kutora matanho pane yavo saiti. Pamusoro pewebhusaiti zviuru makumi maviri zvinoshandisa Pulse uye uwane avhareji kutendeuka kuwedzera kwe20,000%. Iyo nzvimbo uye nguva yezviziviso zvinogona kugadziridzwa zvizere uye, ivo pavanobata kutarisisa kwemushanyi, ivo havatsause kutarisisa kure nechinangwa icho mushanyi aripo. Zvakanaka
Chipiri, June 19, 2018 Muvhuro, Kukadzi 15, 2021 Douglas Karr